Unicode in SMF - MYSTERY ZILLION
Unicode in SMF
April 2011 edited April 2011 in CMS
SMF မှာကော Unicode သုံးလို့ရပါလား? ကိုစေတန်<br>သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုပါလဲ?? အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်သိချင်ပါတယ်။<br><br>ပထမဆုံးတော့ Localhost နဲ့စမ်းကြည့်ရမှာပဲ .. ပြီးတော့မှ Online တက်ရမှာ။ :DD<br><br><မြန်ပြည်မှာနေသ၍ကတော့ လိုင်းမကောင်းသ၍ Local ကနေတက်ဖို့သိပ်မမြင်><br>
SMF က UTF-8 default support လုပ်ပါတယ်။ MySQL ကို UTF8_general_ci နဲ့ ဆောက်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးပြင်စရာ မလိုဘူးထင်တယ်။
Thanks Bro. I'll check.<br>မသိရင်မေးအုံးမှာ :DD<br>